Avadiho ho MP4 ny DVD sy DVD ho MP4 DVD Emulator.online ▷ 🥇
Mpampiasa maro teo anelanelan'ny taona 2000 sy 2009 no nanangona DVD sarimihetsika ara-barotra marobe na kapila vita an-trano, izay azo zahana tsara mipetraka eo ambony sezalava miaraka amina mpilalao manokana. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny fampiasàna betsaka ny serivisy streaming sy ny sehatra azo entina dia nampihena be an'io fomba fanao io, ka nahatonga ny DVD hanangona vovoka amin'ny vatasarihana sasany.
Raha irintsika tahirizo ao anaty rakitra nomerika na ny mifamadika amin'izany ireo horonantsary ao anaty DVD (ento MP4 amin'ny DVD), amin'ity torolàlana ity dia hasehonay anao ireo programa maimaimpoana rehetra natao ho an'ireo filàna ireo, mba hahafahanao mifehy fatratra ny atin'ny kapila optika sy izay tazomina ary izay tokony hariana.
VAKIO IHANY: Ahoana no ovay ny video sy DVD ho MP4 na MKV amin'ny PC sy Mac
Ahoana ny fomba hanovana horonantsary DVD ho MP4 (sy ny vice Versa)
Amin'ireto toko manaraka ireto dia hasehonay anao ireo programa maimaimpoana izay azonay ampiasaina amin'ny solosaininay hanovana ireo kapila optika DVD Video ho rakitra video MP4 ary ny mifamadika amin'izany (avy eo mamorona horonantsary DVD avy amin'ny MP4 iray na maromaro). Ny programa rehetra dia azo ampiasaina tsy misy fetra na fetra amin'ny haben'ny rakitra na DVD hatao, mba hitehirizantsika ny fividianana programa lafo sy efa lany andro ankehitriny.
Fandaharana hamadihana DVD ho MP4
Ny programa voalohany izay anoloranay hevitra ny fanandramana hanova ny DVD nomerika dia HandBrake.
Raha hampiasa ilay programa dia ampidirintsika ao anaty ilay mpilalao aloha ny DVD, andraso 2 minitra, avy eo atombohy ilay programa ary safidio ny mpilalao DVD handefasana ilay horonantsary.
Raha vantany vao nakarina tao amin'ilay interface ilay horonan-tsary, dia jerentsika hoe iza amin'ireo horonan-tsary sy raki-peo hitazonana azy, dia mifidy ny fomba izahay endrika ny endrika MP4, atsanganantsika ho Preset ny feo 576p25 avy eo manindry isika Manomboka fanodinana.
Amin'ny maha-safidy azo soloina ho an'ny HandBrake dia azontsika atao ny mampiasa ny programa VidCoder.
Amin'ny interface tsotra dia azontsika atao ny manavesatra ny atin'ny DVD Video, misafidy izay lalana audio sy horonan-tsary hitazona, misafidy raha hampiditra dikanteny, safidio ny mombamomba ny fiovam-po (ao amin'ny Fikirana Encodings) ary farany avadiho ilay rakitra ho rakitra MP4 amin'ny tsindrio niova fo.
Raha toa ka tsy rakitra MP4 no tadiavintsika hitahiry DVD Video amin'ny MKV (endrika vaovao mifanentana amin'ny Smart TV), dia afaka mampiasa fitaovana maimaimpoana sy mahomby toa ny MakeMKV isika.
Ny programa tsotra indrindra ampiasaina hanovana DVD ho rakitra video nomerika dia tsy misy: raha hampiasa azy io dia manokatra ny programa isika, misafidy ilay kapila optika hakana ilay horonantsary, misafidy ireo làlana hitahiry, misafidy lalana iray hitahirizana ilay rakitra vaovao ary avy eo tsindrio Manaova MKV hiteraka fiovam-po.
Raha vao manomboka ianao ary tsy afaka mampiasa HandBrake sy VidCoder, ity no programa ho anao!
Hanova DVD voaaro
Raha manandrana mampiasa ny programa roa voalohany atolotra etsy ambony miaraka amina DVD voaaro isika dia tsy afaka hiova ho MP4, hita ny fiarovana ny anti-copie natsangana tao amin'ny haino aman-jery tany an-tsena. Ny hany tokana manana rafitra manafoana ireo fiarovana dia ny MakeMKV, fa raha tsy izany dia azonay ampiasaina ihany koa ny iray amin'ireo programa hitanao ao amin'ny torolàlana ho anao Ny programa tsara indrindra handikana DVD (rip) amin'ny PC.
Nota: Tsy fandikan-dalàna ny fanesorana ireo fiarovana mba hanaovana kopian'ny tena manokana, ny zava-dehibe dia ny tsy hivoahan'ny trano kopianay mihitsy (tsy azontsika zaraina na amidy izany).
Fandaharana hanovana MP4 ho DVD
Raha etsy andaniny, mila programa isika hitondrana MP4 amin'ny DVD Video (noho izany mifanentana amin'ireo mpilalao DVD amin'ny birao), mamporisika anao izahay hanandrana avy hatrany ny Freemake Video Converter.
Raha te hampiasa azy dia asio DVD banga ao anaty recorder, atombohy ny programa, kitiho ny bokotra. Video eo amin'ny ankavanana ambony, safidio ireo rakitra MP4 hampiova finoana, kitiho ny bokotra in DVD eto ambany ary manamafy amin'ny farany handoro. Ao amin'io varavarankely io ihany no ahafahantsika misafidy na mamorona menio DVD sy ny kalitaon'ny fiovam-po, na dia mihoatra noho ny ampy aza ny masontsivana fototra ahafahana manao horonantsary DVD tsara.
Fandaharana iray hafa tena tsara hanovana MP4 ho DVD dia AVStoDVD.
Amin'ity programa ity dia afaka mamadika haingana ny horonantsary MP4 amin'ny endrika mifanaraka amin'ny DVD Video isika, mba hahafahantsika mandoro avy hatrany ilay kapila optika. Raha te hanampy horonan-tsary dia tsindrio fotsiny misokatra, raha hanomboka ny fizotry ny fiovam-po dia tsindrio ny bokotra voalohany.
Raha mitady programa feno sy manankarena hitondrana MP4 amin'ny DVD ianao dia manasa anao izahay hanandrana DVD Author Plus.
Amin'izany dia azonao atao ny mamoaka avy hatrany ny rakitra MP4 rehetra avy amin'ilay hazo fampirimana voaorina nefa tsy mila manokatra ny mpitantana ny rakitra isaky ny mahavita ny famoronana kapila optika farany. Rehefa antsika Storyboard aseho etsy ambany dia feno, apetraho ny fehintsoratra DVD ao amin'ny faritra ankavanan'ny varavarankely, kitiho ny Next eo an-tampony, ary hamita ireo asa fandoroana.
Raha te hahita programa hafa ilaina hanovana MP4 ho DVD dia vakio ny anay torolalana ho an'ny hampiova finoana MKV ho AVI na handoro MKV ho DVD.
Miaraka amin'ireo programa voatanisa etsy ambony ireo dia ho afaka hanatanteraka ny karazana fiovam-po isan-karazany avy amin'ny MP4 ka hatramin'ny DVD ary avy amin'ny DVD ka hatramin'ny MP4, mba hamonjy ireo kapila optika amin'ny sarimihetsika haingo sy lamba mandriaka ary koa mamorona DVD hanome ireo havantsika efa antitra na fananana. amin'ireo mpilalao DVD taloha mbola miasa.
Amin'ny torolàlana hafa dia nasehonay anao ireo programa hafa avadiho ny DVD ho MP4 hijerena horonan-tsary amin'ny iPhone, ka ny horonantsary (avy amin'ny DVD) dia mifanaraka amin'ny mpilalao anatiny ao amin'ny iPhone.
Raha te-hanova horonantsary hijerena azy ireo amin'ny Android izahay dia ampidirinay amin'ny mpitari-dalana anao izany Avadiho ny sarimihetsika sy horonan-tsary hijerena smartphone.